EX - ABSDF: ၂၀၁၅ အလွန် နိုင်ငံရေးဟောစာတမ်း
MyanmarDaily.net shared Ko Nyi's photo.
ကျွန်တော်သည် ဗေဒင်ဆရာလည်းမဟုတ် ၊ ဘိုးတော်လည်းမဟုတ် ၊ အကြားအမြင်ရသူလည်းမဟုတ်ပါ ။ သို.သော် တိရိစ္ဆာန်များတွင် မိုးရွာမည် ရေကြီးမည် ၊ငလျင်လှုပ်မည်ကိုကြိုတင်သိတတ်သော မွေးပါဥာဏ် ( Instinct ) ရှိသကဲ.သို.လည်းကောင်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် (၄၆)နှစ်ခန်.နေထိုင်လာခဲ.ပြီးသော နိုင်ငံသား တစ်ယောက်အနေနှင်.လည်းကောင်း ၊ နိုင်ငံရေးကိုမျက်ခြေမပြတ် စိတ်ဝင်စားစွာစောင်.ကြည်.လာသူ တစ်ဦးအနေနှင်.သော်လည်းကောင်း ကျွန်ုပ်ဥာဏ်တစ်ထွာတစ်မိုက်ဖြင်. ပိန်းပိတ်အောင်မှောင်နေသော အနာဂါတ်အမှောင်ထုထဲသို. ဆင်ခြင်ဥာဏ် လက်နှိပ်ဓါတ်မီးကလေး တစ်လက်ဖြင်.မပီဝိုးတစ်ဝါး ထိုးကြည်.ရပေအံ. ။ ဤခန်.မှန်းချက်များမှာကျွန်တော်၏ ပုဂ္ဂလိကထင်မြင်ချက်များသာဖြစ်၍ ဤအတိုင်းတရားသေဖြစ်ရမည်ဟုမဆိုလိုပါကြောင်း ၊ဖြစ်နိုင်သည်များကိုတွက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါကြောင်းကြိုတင်ပန်ကြားအပ်ပါသည် ။
ရွေးကောက်ပွဲသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင် အများကထင်နေသလို ၂၀၁၅ သို.ရောက်ရောက်ခြင်း နှစ်ဦးပိုင်းတွင်ကျင်းပဦးမည်မဟုတ် ။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ယခင်ကပြောခဲ.ဖူးသောစကားရိပ်စကားဦးသန်းထားမှုများ ၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ တတ်နိုင်သမျှ အချိန်ဆွဲထားလိုမှုများကြောင်. ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲသည် ၂၀၁၅ နှစ်ကုန်ခါနီး နိုဝင်ဘာလလောက်မှကျင်းပပေလိမ်.မည် ။ ယခင်အစိုးရသည် (၉) ဂဏန်းကိုသူတို.အတွက်ကံကောင်းစေသောဂဏန်းဟုယုံကြည်သလိုသာ ယခုအစိုးရလည်းယူဆခဲ.ပါက (၉) လပိုင်း (၉)ရက်နေ.၊ (၁၈)ရက်နေ. ၊ (၂၇) ရက်နေ.များတွင်လည်းကျင်းပနိုင်သည် ( ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို မေ လ ၂၇ ရက်နေ.တွင်ကျင်းပခဲ.ပေသည် ) စက်တင်ဘာလတွင်အစောဆုံးကျင်းပနိုင်ခြေရှိပြီး နိုဝင်ဘာအထိလည်းရောက်သွားနိုင်သဖြင်. အစိုးရအဖွဲ.သစ်သည် အများထင်သလို ၂၀၁၅ တွင်ပေါ်ပေါက်လာဖွယ်မမြင် ၂၀၁၆ နှစ်ဆန်းပိုင်းကျမှသာ အာဏာလွှဲပြောင်းဖွယ်ရှိသည် ။
ရွေးကောက်ပွဲတွင် တပ်မတော်မှ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း (ပြည်သူ.လွှတ်တော်တွင် ၁၁၀ ဦး ၊အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် (၅၆ )ဦး ဆက်ယူထားဆဲဖြစ်ရာ ပြည်သူ.လွှတ်တော်တွင်အမတ်နေရာ ( ၃၃၀ ) ဦး ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် အမတ်နေရာ (၁၆၈ ) ဦး ကိုသာ ပါတီများကအဓိကထားယှဉ်ပြိုင်ရမည် ။ ရွေးကောက်ပွဲမသမာမှုများ ၊ဘက်လိုက်မှုများရှိမည်ဖြစ်သော်လည်း တစ်ပြည်လုံးတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်ကသာ အမတ်နေရာအများစုကိုအနိုင်ရရှိလိမ်.မည် ။ တိတိကျကျပြောရလျင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်သည် ရွေးကောက်ခံအမတ်နေရာများ၏ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်း(အမတ်ဦးရေ ၄၂၃ ဦး) အနိုင်ရ၇ှိလိမ်.မည် ။ ကြံ.ခိုင်ရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီသည်ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များ၏(၅) ရာခိုင်နှုန်း( အမတ်ဦးရေ ၂၅ ဦး ) အနိုင်ရရှိလိမ်.မည် ။ တိုင်းရင်းသား ပါတီများသည် (၅) ရာခိုင်နှုန်း ( အမတ်ဦးရေ ၂၅ ဦး ) ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလနှင်.အခြားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီငယ်များသည် (၅) ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး (အမတ်ဦးရေ ၂၄ ဦး ) ခန်. အသီးသီးအနိုင်ရရှိလိမ်.မည် ။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှုံးနိမ်.သူများက အနိုင်ရသောအမတ်များကို ကန်.ကွက်လွှာများအတောမသတ်တင်သွင်းကြသဖြင်. ရွေးကောက်ပွဲကောက်မရှင်မှာ ထိုကိစ္စကိုပဲလပေါင်းအတော်ကြာအောင်ရှင်းရဖွယ်ရှိသည် ။ မဲခိုးမဲလိမ်မှုများ ၊ သွေးထွက်သံယိုမှုများ အချို.မဲဆန္ဒနယ်များတွင်ရှိမည် ။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် White Card ကိုင်ဆောင်ထားသူများမဲပေးခွင်.ရုပ်သိမ်းခံရဖွယ်ရှိသည် ။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၆၆ ဦး ၊ ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ် ၄၉၈ ဦး ၊ စုစုပေါင်း (၆၆၄ )ဦးဖြင်.ဖွဲ.စည်းသည်ဖြစ်ရာ တပ်မတော်သားသည် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ၊ NLD သည် ၆၄ ရာခိုင်နှုန်း ၊ ကြံ.ခိုင်ဖွံ.ဖြိုးပါတီသည် ၄ ရာခိုင်နှုန်း ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလနှင်.အခြား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီငယ်များသည် ၃ ရာခိုင်နှုန်း ဖြင်.ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဖြစ်ပေါ်လာမည် ။ NLD သည် အဓိကပါတီကြီးဖြစ်လာကြပြီး ၊ ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီသည် အင်အားအကြီးဆုံးသောအတိုက်အခံပါတီကြီးဖြစ်လာမည် ။ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် လွှတ်တော်တွင်းဆုံးဖြတ်ချက်များမဲခွဲသောအခါ အဓိက သော.ချက် ( Key Holder ) ဖြစ်လာပေမည် ။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သည် N.L.D မှပင်ဖြစ်မည် ။
N.L.D သည် အနိုင်ရပါတီဖြစ်သဖြင်. ပထမဆုံးအကြိမ် တရားဝင် အစိုးရဖွဲ.ခွင်.ရမည် ။ လွှတ်တော်တွင် ဒုသမ္မတလောင်းတစ်ယောက်စီရွေးထုတ်သောအခါ တပ်မတော်မှတစ်ဦး ၊ ပြည်သူ.လွှတ်တော်မှရွေးသော N.L.D အမတ်တစ်ဦး ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ N.L.D အမတ်တစ်ဦးတို. စုစုပေါင်းသုံးဦး သမ္မလောင်းများဖြစ်လာမည် ။ ထိုသုံးဦးကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ အများဆန္ဒဖြင်.ထပ်ရွေးသောအခါ လွှတ်တော်တွင် ၆၄ ရာခိုင်နှုန်းမဲရထားသော N.L.D က တပ်မတော်သားနှင်.ကြံ.ခိုင်ရေးနှစ်ရပ်ပေါင်းထက်မဲသာသဖြင်. N.L.D မှရွေးသောသူသည် သမ္မတဖြစ်လာပေမည် ။ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်ပိုင်ခွင်.ကို ကန်.သတ်ထားသော ၊ သားသမီးများသည် နိုင်ငံခြားကျေးဇူးသစ္စာခံမဖြစ်စေရဟူသောအချက်ကို ပြင်ဆင်မပေးသဖြင်. မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် တစ်ကမ္ဘာလုံးကမျှော်လင်.နေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတရာထူးရရှိရေးသည်ကားဖြစ်လာနိုင်မည်မဟုတ် ။ N.L.D မှ အမတ်မင်းများရွေးချယ်မဲအများစုဖြင်.တက်လာသော သမ္မတသည် အမျိုးသမီးသမ္မတ ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ချေ ။ ထို.ကြောင်. သမ္မတ (သို.မဟုတ် ) ဒုသမ္မတ တစ်ဦးဦးသည် အမျိုးသမီးဖြစ်လာမည် ။ ထိုအမျိုးသမီးသည် N.L.D ဖြစ်မည် ။ စစ်တပ်မှရွေးချယ်လိုက်သော ကိုယ်စားလှယ်သည် ဒုသမ္မတသာဖြစ်လာမည် ။ ထိုအခါ အစိုးရအကြီးအကဲမှာအောက်ပါပုံစံအတိုင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်မည် ။
အမျိုးသမီးသမ္မတ ( N.L.D )
အမျိုးသား ဒုသမ္မတ ( N.L.D )
အမျိုးသား ဒုသမ္မတ ( တပ်မတော် )
(ထိုသို.မဟုတ် ပါက အောက်ပါပုံစံဖြစ်မည် )
အမျိုးသားသမ္မတ ( N.L.D )
အမျိုးသမီးဒုသမ္မတ ( N.L.D )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်လွှတ်တော်နာယကအဖြစ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးပထမဆုံးကျင်းပသောနေ. တွင်ရွေးကောက်ခံရမည် ။ထိုသို.မဟုတ်ပါက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အစိုးရအဖွဲ.ထဲတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရာထူးကိုရယူလိမ်.မည် ။ ပညာရေးနှင်.ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးရာထူးများကိုရယူနိုင်သော်လည်း သမ္မတမလုပ်ရလျင်သူမနှင်.အကိုက်ညီဆုံးရာထူးမှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရာထူးဖြစ်သည် ။တစ်ချိန်တည်းမှာပင် N.L.D ပါတီကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဥက္ကဌအဖြစ်နှင်.ဆက်လက်ဦးဆောင်မည် ။
ယခင် ကြံ.ခိုင်ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီအစိုးရလက်ထက်ကအစိုးရအဖွဲ.ထဲတွင် စစ်ထွက်များ ၊ခရိုနီများ ၊ မိမိပါတီဝင်အများစုကိုသာ ၀န်ကြီးအဖွဲ.တွင် အဓိကနေရာပေးခန်.အပ်ခဲ.ကြသော်လည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ် အစိုးရလက်ထက်တွင် မိမိပါတီဝင်မဟုတ်သော်လည်း သင်.တော်သော တတ်သိ ပညာရှင်များကိုအစိုးရအဖွဲ.ထဲသို.ခေါ်သွင်းလိမ်.မည် ။ ၈၈ မျိုးဆက် ပွင်.လင်.လင်းလူ.အဖွဲ.အစည်းမှ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးများ အစိုးရအဖွဲ.အတွင်းရောက်ရှိလာနိုင်သည် ။
ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးသည်အလွန်ရှည်လျားသော လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးအဖြစ်နှေးကွေးလေးလံစွာ ရွေ.လျားနေလိမ်.မည် ။ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလေ.လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီ သည် သူတို.၏ထင်မြင်ယူဆချက် တွေ.ရှိချက် များကိုလွှတ်တော်သို. တင်ပြရမည် ။လွှတ်တော်မှ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ကန်.ကွက်ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်း ၊ နှုတ်ပါယ်ခြင်း ၊ဆိုင်းငံ.ခြင်း ၊ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခြင်းများပြုရမည် ၊ ပြီးလျင်သမ္မတထံသို.ပို.ရမည် ၊သမ္မက သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင်.လွှတ်တော်သို.ပြန်လည် တင်ပို.လိမ်.မည် ။ လွှတ်တော်တွင်အချိန်အတန်ကြာအောင်ဆွေးနွေးငြင်းခုန်ပြီးသောအခါ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပရန် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို.အကြောင်းကြားရမည် ။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်း ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်အလုပ်ရှုပ်နေရာ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကို ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးမှလုပ်ရန် (သို.မဟုတ် ) ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲနှင်. ဆန္ဒခံယူပွဲကိုပေါင်း၍ပြုလုပ်ရန် အကြောင်းပြန်ကြားပေလိမ်.မည် ။သို.ဖြင်.ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်း၏ရလာဒ်ကို သမ္မတဦးသိန်စိန်လက်ထက်တွင် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြနိုင်မည်မဟုတ်ချေ ။ ပြည်သူအများစုလိုလားတောင်းဆိုနေကြသော ပုဒ်မ ၅၉(စ) ပြင်ဆင်ရေးမှာ လွှတ်တော်အတွင်းအာဏာရနေသော ရှေးရိုးစွဲပုဂိုလ်အများစုကြောင်. အလှမ်းဝေးနေပေဦးမည် ။
ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒပြင်ဆင်ရာတွင် တိုင်းရင်းသားတို.အခွင်.အရေးများတောင်းဆိုချက်များသည် အတော်အသင်.အတိုင်းအတာအထိရရှိလာနိုင်စရာရှိသည် ။ ဥပမာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များကိုသမ္မတက တိုက်ရိုက်ခန်.အပ်သည်.စနစ်အစား ပြည်သူလူထုကမဲပေးရွေးချယ်သောစနစ်သို.ပြောင်းခြင်း ၊ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဇယား(၁) ပြည်ထောင်စုဥပဒေပြုစာရင်းမှ လုပ်ပိုင်ခွင်.အချို.သည် ဇယား(၂) တိုင်းဒေသကြီး သို.မဟုတ်ပြည်နယ် ဥပဒေပြုစာရင်းထဲသို.ရောက်လာလိမ်.မည် ( ဥပမာ စွမ်းအင် ၊လျှပ်စစ် ၊သတ္တုနှင်.သစ်တော ကဏ္ဍ ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင်.မွေးမြူရေးကဏ္ဍ ၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍ ၊ စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍ၊ လူမှုရေးကဏ္ဍ ) မှအချို.လုပ်ပိုင်ခွင်.များ တိုးတက်ရရှိမည် ။ သို.သော် တိုင်းရင်းသားများ အဆိုပြုတင်ပြနေသော ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် (ဖက်ဒရယ်တပ်မတော် ) ဖွဲ.စည်းရေး ကို ပြည်ထောင်စုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ၊ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို.မှ လက်မခံပါယ်ချလိမ်.မည် ။ ဖျက်သိမ်းလိုက်သောတိုင်းရင်းသားတပ်မတော်များမှ အရာရှိကြီးများမှာ အနေကြာ မေဂျာဖြစ်ဟူသော မြန်မာ.တပ်မတော် မှဆောင်ပုဒ်နှင်.အညီ မေဂျာ ( ဗိုလ်မှူး ) ရာထူးများကိုသာလက်ခံရရှိလိမ်.မည် ။ ဖျက်သိမ်းလိုက်သော K.N.U ၊ K.I.A , S.S.A စသောတပ်များမှ တိုင်းရင်းသားများ မြန်မာ.တပ်မတော်တွင် ကိုယ်.တိုင်းရင်းသားသီးသန်.တပ် ကို ပြန်လည်ကွပ်ကဲရသော ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ၊ ဗိုလ်ချုပ် ၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာထူးများနှင်.မူအလှမ်းဝေးနေဦးမည် ။
အခုရှုပ်မှနောင်ရှင်း ၊ အစကောင်းမှအနှောင်းသေချာ စသော မြန်မာစကားပုံများအတိုင်းမကျင်.သုံးခဲ.ပဲ ယခင်(န.၀.တ ၊န.အ.ဖ)စစ်အစိုးရလက်ထက်က စစ်တပ်နှင်.ခရိုနီတို.ပေါင်းကာ ရှုပ်ချင်တိုင်းရှုပ်ခဲ.သောအရှုပ်ထုပ်များသည် ၂၀၁၅ အလွန်တွင်လည်း ရှုပ်မြဲရှုပ် နေမည် ။ တပ်မတော်မှ သိမ်းယူခဲ.သောမြေများ မူလပိုင်ရှင်များသို.ပြန်ပေးရေးမှာ စာရွက်ပေါ်တွင်လွယ်သလောက် ကိုယ်ကျိုးသုံး ထားမှုများ၊ ကိုယ်ကျိုးအတွက်အဆင်.ဆင်.လက်လွှဲရောင်းချထားမှုများကြောင်. တပ်မတော်အရာရှိဟောင်းများက အလွယ်တကူ ဘ ယ်တော.မှပြန်ပေးမည်မဟုတ်ချေ ။ အလွန်သတ္တိကောင်း၍ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကဲ.သို. စစ်တပ်မျက်နှာထက်တိုင်းပြည်မျက်နှာ ကိုကြည်.တတ်သော ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တစ်ယောက်လက်ထက်သို.မရာက်မချင်း စစ်တပ်မှ အသိမ်းခံထားရသောလယ်များဘယ်တော.မှပြန်ရမည်မဟုတ်ချေ ။ နောက်ထပ်အသိမ်းမခံရလျင်သော်မှကံကောင်းလှသည်ဟုပျော်ရွှင်ကြည်နူးကြရန်ဖြစ်သည် ။
၂၀၁၅ အလွန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ စီးပွားရေးအခွင်.အလန်းများပို၍ ပွင်.လန်းလာမည် ။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ဟုန်ထိုးကြီးမားတိုးတက်လာပြီး ရေရှည်စီမံကိန်းများကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုမရှိခြင်းကြောင်. ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုစတင်ခံစားရမည် ။ ရွေးကောက်ပွဲတွင်ရှုံးနိမ်.သွားသော လက်ညှိုးညွန်ရာရေဖြစ်ခဲ.သော အထည်ကြီးပျက် အာဏာရှင်အချို.မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်ကာ လူမှုရေးအသင်းများတွင် လူတွင်ကျယ်ဝင်လုပ်ကာ ဒီမိုကရေစီမကောင်းကြောင်းကြုံလျင်ကြုံသလိုဟောပြောမည် ။ အာဏာရပါတီဖြစ်လာမည်. ပါတီကြီး၏အောက်ခြေအဖွဲ.၀င်အချို.သည် အာဏာယစ်မူးပြီးလူထုကိုထီမထင်သောကိစ္စအချို.ဖြစ်လာမည် ။စာနယ်ဇင်းသမားများအမှန်ကိုရေးလွန်းသောကြောင်.ထောင်တန်းကျခံရကိန်းရှိသည် ။ ယခင်အစိုးရလက်ထက်က တရားလက်လွတ်ပြုလုပ်ခဲ.မှုများကို တရားစွဲဆိုမှုများ ပိုမို များပြားလာသဖြင်.ရှေ.နေများဝင်ငွေကောင်းမည် ။ ခရိုနီများ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ရှေ.တွင်ခြေချင်းလိမ်နေမည် ။ ခရိုနီတို. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခြံအတွင်းသို. ကားကြီးကားငယ်များဖြင်.တံခါးမရှိဓါးမရှိဝင်ထွက်ခွင်.ရနေခြင်းကို အညတရ ထောင်ထွက်နိုင်ငံရေးသမား အချို.မှာ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းထောင်.ကွမ်းယာဆိုင်မှ ငေးကြည်.နေရလိမ်.မည် ။ စစ်အစိုးရလူထွက်များသည် သူတို.တာဝန်ယူစဉ်ကတိုင်းပြည်အပေါ်ဘယ်လိုကောင်းခဲ.ကြောင်းစားမြုံ.ပြန်ကာ စာအုပ်များရေးသားထုတ်ဝေကြလိမ်.မည် ။သာကူး ၊ ဆိတ်ဝှေးစေ.များသည် ခြံစည်းရိုးဟိုဘက်မှသည်ဘက်သို.မျောက်လွှဲကျော်ပမာ ခုန်ကြလိမ်.မည် ။ တောင်သူလယ်သမားများ သည်လယ်ယာမြေများမရှိတော.သောကြောင်. ရာထူးတက်ကာ ဟိုတယ်များတွင်တံခါးပေါက်စောင်.များဖြစ်ကြလိမ်.မည် ။ အချို.လယ်သမားများသည် အရက် ၊ဘီယာစက်ရုံတွင် အလုပ်ရကြလိမ်.မည် ။နိုင်ငံခြားသို.သွား၍ အလုပ်လုပ်သူများလွန်းသောကြောင်.ရွာတွင် နို.စို.ကလေးနှင်.အဘိုး အဘွားများသာကျန်မည် ။
ပြည်သူများကား ထမင်းတစ်နပ်လျှော.စားပြီး စုဆောင်းကြသောကြောင်. ယခင်ကထက်စားနိုင်သောက်နိုင်ရှိလာပေလိမ်.မည် သို.သော်ယခင်ကမကြာခနပါးရိုက်ခံခဲ.ရသော ဒဏ်ရာများကိုကုစားရသဖြင်.ဆေးဖိုးအကုန်အကျများနေမည် ။ဤကား ၂၀၁၅ အလွန်နိုင်ငံရေးဟောကိန်းပေတည်း ။